☀BLUES☀ iApartment ephambi kolwandle
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMo
I-Chic kunye necwecwe eliphambi kwendlu engaselunxwemeni kunye ne-terrace enombala we-retro touch, kanye kunxweme lwendawo ye-Asala. Ukuhamba nje ngemizuzu emi-5 ukuya kwiMarike yaseAsala; imakethi yeDahab yasekhaya ephambili kunye nazo zonke iivenkile. Ukuqala kwe-promenade yezokhenketho (North end) kwakhona yimizuzu emi-5 yokuhamba elunxwemeni.
Qaphela: Ngenxa yokuhlala kwabantu abaninzi, ukungena kwangethuba kunye nokuphuma kade akwenzeki, njengoko kuthatha ixesha ukuyenza icoceke ngokungenachaphaza. Nceda uyiqwalasele le nto phambi kokuba ubhukishe. Nangona kunjalo, ungazishiya iibhegi zakho.
Izinto ezisemgangathweni eziza nezindlu zam:
-WiFi (ilungile ngokwentelekiso yeDahab, isantya siyahluka: 5-10 Mbps)
- I-air conditioner yegumbi lokulala
- Umenzi wekofi
-I-oveni yombane OKANYE i-microwave (ukulungiselela ukutya ngokukhawuleza)
- Izihlangu zaselwandle, ii-snorkels kunye neetawuli
-Ifestile yeglasi efakwe iTinted (indlela enye) yobumfihlo bemini kunye nokunciphisa ubushushu
Izinto ezongezelelekileyo eziza ne-'BLUES' Beachfront Apartment:
- Ithala elineebhedi zelanga
Indawo yokuhlala ikwindawo yase-Asala, edume ngemakethi yayo yaseAsala. Ubumelwane buzolile kakhulu, kodwa ukuhamba nje kwemizuzu emi-5 ukuya ekuqaleni kwe-promenade yabakhenkethi (igadi ye-Eel), kunye nomzuzu we-15 uhamba ngonxweme ukuya kwi-Light House (eyona ndawo iphithizelayo ye-promenade). Ubumelwane bunoluntu lweentsapho ezincinci zangaphandle, kwaye kukhuselekile ukuhambahamba.
Umbuki zindwendwe ngu- Mo
Ndiyafumaneka ukuze ndinxibelelane neendwendwe zam nge-app ka-Airbnb nango-whatsapp :) Inombolo yam yefowuni iza kuthunyelwa ngokuzenzekelayo ngu-Airbnb emva kokuba iqinisekisiwe indawo yokubhukisha.
Ngokubhukisha okungaqinisekiswanga: Nceda uqaphele ukuba u-Airbnb uvalile iinombolo zefowuni needilesi ze-imeyile de kuqinisekwe ukubhukisha. Oku kukuqinisekisa ukuba unxibelelwano kunye nentlawulo yenziwa nge-app. Naziphi na izicelo ezizama ukunxibelelana okanye ukuhlawula ngaphandle kwe-app ziya kubangela isilumkiso esizenzekelayo kumamkeli zindwendwe ngu-Airbnb kwaye umsebenzisi unokuxelwa/avalwe.
Ngamafutshane: Nceda ungaceli inombolo yam yefowuni okanye unike intlawulo ngaphandle kwe-Airbnb.
Ndiyafumaneka ukuze ndinxibelelane neendwendwe zam nge-app ka-Airbnb nango-whatsapp :) Inombolo yam yefowuni iza kuthunyelwa ngokuzenzekelayo ngu-Airbnb emva kokuba iqinisekisiwe i…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Dahab